काेभिडबाट श्वास फेर्न गाह्रो भयो ? तुरून्त अपनाउनुस् यी १६ उपायहरू
बिरेन्द्र बिष्ट	 प्रकाशित २०७८ जेष्ठ ११
काठमाडौ – कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को नयाँ भेरियन्ट सहित दोस्रो लहरले भारतलगायत नेपालमा व्यापक असर पारिरहेको छ । अस्पतालमा आइसीयू बेड र अक्सिजनको कमीका कारण भारतमा धेरै बिरामीको मृत्यु भइरहेको छ । नेपालमापनि बिरामीको अवस्था नाजुक छ ।
यस्तोमा स्वास्थ्य अधिकारीले मानिसहरुलाई घरमा नै बसेर उपचार गराउन सल्लाह दिइरहेका छन् । डाक्टरले सास फेर्न समस्या हुँदा अस्पताल आइहाल्न आवश्यक नभएको बताइरहेका छन् ।
काेभिडबाट श्वास फेर्न गाह्रो भयो ? तुरून्त अपनाउनुस् यी उपायहरू